Ku ilaalinta iPhone-gaaga muraayadda gaashaan aan la arki karin + | Wararka IPhone
louis padilla | | Qalabka IPhone, dhowr
Ku soo lifaaqida shaashadda shaashadda iPhone-kaaga waa dhibaato laba qof oo isku dhowba waqti ka waqti la kulma. Sida kiisaska oo kale, waxaa jira dad qatar ah oo xambaarsan iPhone-koodda "bareback" iyo kuwa kale oo taxaddar badan leh oo doorbida inay qurbaan qurxinta laakiin isdaji haddii ay dhacdo dhicitaan suurtagal ah. Marka laga hadlayo daboolida marwalba waan iska cadeeyay oo waxaan ka imid kooxda "taxaddar", laakiin shaashadda marwalba waan diidanaa inaan isticmaalo ilaaliyeyaasha, illaa iyo hadda. Ka dib markaan ku arkay dhowr xoqitaan yar oo shaashadda ah iPhone 7 Plus waxaan go'aansaday inaan doorto ilaaliye tayo leh sida Muraayadda Daahsoon + laga bilaabo ZAGG oo aan ku faahfaahin doono hoos.
1 Saamaynta iyo xoqida xoqida
2 Rakibaadda fudud oo dhakhso leh
3 La jaan qaadi kara kiis kasta
4 Taabasho wanaagsan iyo aragti wanaagsan
Saamaynta iyo xoqida xoqida
ZAGG waxay xaqiijineysaa in InvisibleShield Glass + ay sadex jibaareyso iska caabinta shaashadda iPhone-kaaga marka lala barbardhigo muraayad aan wax difaac ah laheyn Caabbinta saamaynta iyo iska caabbinta xoqida, taas oo macnaheedu yahay inaad ku raaxeysan karto raaxo badan ka dhanka ah wixii dhici kara shil ama xoqid kasta oo ku dhici karta dhalada hore ee iPhone-kaaga adeegsiga maalinlaha ah awgeed. Ma xasuusto inaan ka warqabo inaan awooday inaan iphone-ka wax ku xoqo wax walbana aad ayaan uga taxadaraa, hadana waxay horeyba u leedahay dhowr xagasho yar oo aanan caawin karin laakiin aan arko.
Rakibaadda fudud oo dhakhso leh
Waqtigan xaadirka ah uma baahnid inaan sharaxno sida loo dhigay ilaaliyeyaashan. Sanduuqa waxaa ku jira wax kasta oo aad u baahan tahay: shukumaan qoyan oo aad ku nadiifiso shaashadda, maro microfiber ah si aad uga saarto qashinka iyo ilaaliyaha shaashadda laftiisa, iyo sidoo kale warqad yar oo dhejiska ah si meesha looga saaro boodh kasta oo hadhay oo nadiif ah ka dib. Sida a peculiarity, waa in la ogaadaa in ilaaliyaha ayaa la socda laba tab oo ku yaal darafyadiisa kuwaas oo kuu oggolaanaya inaad si fudud ula jaanqaadi karto qalabkaaga adigoon saarin. Waxaan isku dayay ilaaliyaal badan tanina waxay ahayd tii ugu horaysay ee nidaamkan, waxaanan u arkaa inay aad u anfacayso.
Marka la is waafajiyo oo la dhigo Wax dhibaato ah kuma qabin goobooyin laga yaabo inay ku sii nagaadeen muraayadda hoostooda, rakibaadda ayaa runtii ahayd mid deg deg ah markii ugu horreysay Waxay sifiican ugu habboonayd dalabyadayda. Laga soo bilaabo waxa ay ZAGG ku leedahay boggeeda internetka iyo wixii aan ku xaqiijiyey ilaaliyeyaasha kale, haddii ay jiraan wax goobooyin hadhay, way fududahay in laga saaro iyaga oo riixaya ilaaliyaha, oo xitaa waad qaadi kartaa oo waad awoodi kartaa inaad dib u dhigto haddii loo baahdo.
La jaan qaadi kara kiis kasta
Waxay ahayd lagama maarmaan markii la dooranayay ilaaliyaha saxda ah: waxay ahayd inay la jaanqaado mid ka mid ah daboolkayga. Waxaan horey kuugu tusay munaasabado kale ilaaliyeyaal kale oo loogu yeero "3D" ama kuwa dhameystiran, oo gaara qarka shaashadda. Difaacayaashani ayaa si qurux badan u fiican (sida ugu yar aniga aragtidayda) laakiin waxay ku dambeeyaan inay soo baxaan markii aad dusha ka saarto. Kadib dhowr nooc oo noocaan ah, go'aanka ugu macquulsan ayaa ah in la isticmaalo midka geesahiisa la arki karo laakiin taasi kor uma qaadi doonto markaan dabool ku dul dhigo., iyo ZAGG Glass + kan ayaa buuxinaya shuruuddaas. Haddii aad doorbideyso kuwa dhameystiran, ZAGG lafteeda sidoo kale waxay ku leedahay noocan buugiisa.
Taabasho wanaagsan iyo aragti wanaagsan
Waxaa jira ilaaliyayaal badan, iyo qiimayaal aad u kaladuwan, laakiin tayada laguma cabbiro oo keliya ilaalinta ay bixiyaan, taas oo laga yaabo inay tahay cunsurka aasaasiga ah, laakiin sidoo kale taabashada ilaaliyeyaashan iyo sida ay u saameynayaan muuqaalka shaashadda. Kuwani waa laba dhinac oo ah halka InvisibleShield Glass + uu imtixaanka si muuqata uga gudbo. Taabashadu kuma kala duwana marka loo eego shaashadda iPhone-ka, mana aanan dareemin wax isbeddel ah oo ku yimid aragtida, xitaa xitaa dharaar cad. Uma fiirsado milicsiga in ka badan sidii caadiga ahayd, mana yarayn nuurkii, waana taas mid aad muhiim u ah, maxaa yeelay iibsashada taleefan shaashad leh sida iPhone 7 Plus iyo ku dhaawacidda ilaaliye waa in la ciqaabaa.
Qodob kale oo wanaagsan oo ka duwan qaar ka mid ah ilaaliyeyaasha aan horay isugu dayay ayaa ah in geesaha aysan fiiqnayn. , laba ka mid ah daqiiqadaha aad ku aragto inaad xiran tahay ilaaliye maxaa yeelay waxaad toos ula xiriiraysaa geesaheeda. Oo yaanan ilaawin in ZAGG uu bixinayo dammaanad nololeed inta aad ka sii adeegsaneyso aaladda aad dhigatay. Waxaad ku heli kartaa gudaha Amazon Spain iyo bogga rasmiga ah ee ZAGG, Qiimaha oscillates ah 30 €.
ZAGG Muraayadda Gaashaanka aan La Arki karin +
Dareen wanaagsan iyo muuqaal
Ilaa 3 jeer ka caabin badan
Dammaanad qaadka nolosha
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Ku ilaalinta iPhone-gaaga muraayadda gaashaan aan la arki karin +
Immisa ayey ku siinayaan inaad ku xayeysiiso ilaaliye 30-buck ah?
Aniga ahaan Waxba, waan jeclaan lahaa. Haddii aad ka mid tahay kuwa u maleynaya in ilaaliyaha € 5 ee laga iibsaday Shiinaha uu ka fiican yahay muraayadda la socota mobile 900 mobilada, markaa adiga ayey kuu fiican tahay. Markaan wax kugula taliyo, waxaan ka walwalsanahay inay tahay mid tayo fiican leh oo leh dammaanad ugu yar. InvisibleShield wuxuu sameysanayay ilaaliyayaal sanado badan, wuxuuna ku noqon doonaa sabab.
Hagaag, isku dhaca baruurta ... In applesfera waxay sidoo kale kobciyaan "megaprotector"
Aabbayaashood 'isku soo beegiddooda, saddexda faallooyin ee ka jira boggan oo leh isla cinwaanka IP-ga ayaa u heellan trolling ... fiiri waxa jira.
Maaha wax aan jirin, laakiin Amazon lafteeda waxaad ka heli kartaa kuwa nooca Spigen ee ku saabsan 7 euro, oo sidoo kale soo saaraa ilaaliyeyaasha iyo daboolida sanado badan. Ma aqaano haddii kuwa qoraalkan ku jira ay ka fiicnaan doonaan iyo in kale, in kasta oo ay dhammaantood u muuqdaan inay si joogto ah u socdaan hareeraha. By habka, kuwa Spigen ayaa ku xiran xagga sare. Sikastaba xaalku ha ahaadee, ilaaliyeyaashani wax dammaanad kama qaadayaan haddii aadan lahayn dabool (waxaan kaliya ka jeclahay kuwa maqaarka madow ee ka yimaada Apple, maxaa yeelay midabbada kale waqti aan dheereyn bay ku dhacaan), tan iyo haddii saameynta dhicitaanku ay aag u socoto lama ilaaliyo, sida wareega wareega oo dhan, ganacsi xun.
Jaamacadda dhexdeeda, waxaan ku sameynay tijaabooyin jilicsan oo saameyn ku leh muraayadaha Shiinaha ee ka soo horjeeda noocyada kale ee la aqoonsan yahay natiijaduna waa isku mid, iyada oo kala duwanaansho ku dhow 5% la barbar dhigo kuwa qaaliga ah ee Shiinaha. Gunaanadku wuxuu yahay inay si isku mid ah u yihiin tan iyo markii 5% ay ku kala duwan yihiin kala-goynta xasilloonida oo aadan waxba ka ogeyn gabi ahaanba wax, haa haa, jeebkaaga wax kale 😉
xigasho: Waxaan ahay injineer warshadeed
Macluumaad wanaagsan. Khibradeyda aan u leeyahay ilaaliyeyaasha si kastaba ha noqotee waxay si kale iigu sheegaysaa. Waxaan isticmaalay ilaaliyaal raqiis ah oo jabay markii ugu horeysay iyo kuwa kale oo "kafiican" oo waqti dheer qaatay. Laakiin macluumaadkaagu waa mid xiiso leh, in kasta oo ay ka hor imaanayso waxa ay magacyadu bixiyaan.
Wixii aan kuu sheego, uma ogolaanayo naftayda inaan ka faa'iideysto hal euro madaama aanan Shiinaha aheyn mana iibiyo ilaaliye hahahahahahaha
Isku xiraha Smart ka ah ee iPhone ka 2017? Marka wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya